Falanqayn: Itoobiya ma dhisan kartaa dimuqraadiyad si fiican u shaqeysa oo ku saleysan federaal qowmiyadeed? – Majaladda
Intii lagu guda jiray sanadka koowaad ee Abiy Axmed uu xukunka haayey, Itoobiya waxaa soo maray xoreyn xowli ah oo dhanka siyaasada iyo dhaqaalaha ah laakiin siyaasada qowmiyadaha Itoobiya waa arin u baahan waqti lagu dhammeystiro. Itoobiya waxaa laga yaabaa inaysan waligeed sidan oo kale u kala qaybsamin.
Kacdoonada rabshadaha wata ee ay dhigayaan qowmiyaha ku dhaqan dalka Itoobiya ayaa sii xoogeysanaya iyadoo kacdoonada ay bar bar socdaan dagaalo lagu qaaday xerooyinka ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin qaar kamid ah gobolada kacdoonada ay ku xoog badan yihiiin.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, khudbad uu u jeediyay shacabka Kenya sanadkii 2015 wuxuu ka digay in la sii wado siyaasadaha ku saleysan qowmiyada-kali-taliska ah. Siyaasada noocan oo kale ah oo aan taariikh lahayn, ayuu ku tilmaamay, inay ku egtahay dal burburin. U adeegsiga qowmiyadeed, cabir siyaasadeedkaasi waxay si weyn uga soo horjeedaa nidaamka dimoqraadiga ah ee dowladda iyo qiyamka asaasiga ah ee muhiimka u ah horumarinta sinnaanta iyo caddaaladda.
Siyaasadaha ku saleysan qowmiyadeedka waxay dhiiri gelineysaa aragtida adduunka oo leh khadad qeexan oo gaar ah oo u dhexeeya ?annaga? iyo ?iyaga?, iyo ficillada siyaasadeed ee ku saleysan u xaglinta koox gaar ah, iyo takoorka kooxaha kale. Feker la?aanta noocaas ah iyo xifaaltanka qowmiyadeed ayaa suuragal ah inay aad u burburiso umad iskhilaafsan lafteeda waxay siisaa bar bilow oo aad ugu nugul horumarka dhaqaalaha iyo siyaasada.
Siyaasadda qowmiyadeedka waa bambaano waqti dhacda. Waxaana ka buuxa tusaalooyin cabsi leh oo ku saabsan cawaaqibta ka dhalan kara takooridda xagga qowmiyadeed. Iyadoo la ogyahay cawaaqibta ka dhalan karta, dalal badan oo Afrikaan ah maanta waxay iska ilaaliyaan in qowmiyadaha lala xiriiriyo siyaasada, kuwa aan awoodin inay ka fogaadaanna waxay si adag uga shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa inay horumarka sii socda. Marka la arko xaalad sidaas ah, waxaa la isweydiin karaa sababta ay Itoobiya u dooratay inay ku sii socoto ku dhaqankeeda, iyo dhiirigelinta, siyaasad ku saleysan qowmiyadeedka.
Federaalka qowmiyadeedka ee Itoobiya
Marka ugu horeysa, qofku wuxuu u arkaa siyaasad qowmiyadeedka inay ka dhalaneyso abuurista federaal ku saleysan qowmiyadeed, oo uu soo bandhigay xisbiga isbahaysiga ee Itoobiya ee loo yaqaan EPRDF, kaasoo xukumayay Itoobiya ilaa 1991.?EPRDF waxay ka soo ifbaxday tobanaan sano oo dagaal sokeeye ah kaas oo ay jabhado ku kacsan qoomiyado mucaarad ku ah awooda dhexe. Xisbigu waa natiijada isbahaysiga dhowr ka mid ah kooxahan. Kooxda Tigreyga ee Jabhadda Xoreynta (TPLF) ayaa aasaastay isbahaysiga, waxayna taariikh ahaan ahayd hogaaminaya EPRDF. TPLF waxaa la aasaasay 1974 waxayna isugu soo baxeen iyagoo ka soo horjeeday boqortooyada Itoobiya iyo faquuqida qoomiyadaha tigrays-ka, taas oo aasaas u ahayd halganka ay xaquuqda tigraysku ugu jiraan.
EPRDF ayaa markii hore loo aasaasay isbahaysi ay ku midoobeen kooxo kala duwan oo qowmiyadeed ku saleysan. Markii EPRDF xukunka lawareegtay, waxay gacan ka gaysatay isir ahaan inuu noqdo cabirka udub dhexaadka u ah muuqaalka siyaasadeed ee Itoobiya, kaas oo inta badan qaabeeyay nidaamka siyaasadeed ee Itoobiya.
Isbedeladaas kadib doorashadii ra?iisal wasaaraha cusub ee isbadal doonka ah Abiy Ahmed wuxuu hoosta ka xariiqay sida ay u adagtahay in laysku daro dimuqraadiyada iyo federalka qowmiyadeedka.
Harry Verhoeven, oo ah borofisoor ka tirsan jaamacadda Georgetown, ayaa maqaal uu ka qoray siyaasada arrimaha dibedda, waxa uu isku xirayaa rabshadaha qowmiyadeed ee maanta ka socda Itoobiya iyo waxa uu ku tilmaamay su?aasha aasaasiga ah ee xudun u ah siyaasadda Itoobiya qarniyadii 20aad iyo 21aad: Sidee dib loogu qaabeyn karaa boqortooyooyin fara badan oo loo dhisay iyadoo la adeegsanayo rabshado qaran oo casri ah?
Jawaabta uu qoray waxay ahayd, EPRDF iyo waxyaabo kale, in la siiyo ismaamul goboleed aad u tiro badan qawmiyadaha kala duwan ee Itoobiya. Halkii ay ka hor imaan lahaayeen hayb goboleed ku saleysan qoomiyad, EPRDF waxay ka dhigtay aasaaska gobolka.
Horeyba intii lagu guda jiray aasaaskii nidaamka siyaasadeed horaantii 1990-meeyadii, shakhsiyaad iyo ururo kala duwan waxay ka hadleen siyaasada nuucaan ah oo caqabad ku ah wadada dimuqraadiyada oo si fiican u shaqaysa. Inbadan waxay u arkeen inay tahay hay?ad dhisatay khilaafaadka gobolada. Si kastaba ha noqotee, muddadii 27-da sano ahayd ee ay xukunka hayeen, EPRDF iyo TPLF waxay sii wadeen dhiirrigelinta siyaasadaha ku saleysan qowmiyadda, waxayna si adag uga shaqeeyeen ?isir-sooca? dhallinyarada.
Muhiimadda la siinayo qowmiyadda sidoo kale kuma koobna xisbiga talada haya ee EPRDF. Maanta, in kabadan boqolkiiba 70 xisbiyada siyaasadeed ee dalka Itoobiya waxay ku dhaqmaan siyaasad ku saleysan qowmiyadaha waxayna matalaan qowmiyad. Isir nacaybka wuu kobcayaa wuxuuna si tartiib tartiib ah ugu sii xoogaysanayay gudaha Itoobiya oo dhan. Intii lagu gudajiray xamaasadii baahsaneyd ee ra?iisul wasaare Abiy Ahmed uu diyaar u ahaa inuu dib u habeyn ku sameeyo, isla markaana uu balanqaadayo inuu hagaajinayo xaaladaha dimoqraadiyada ee Itoobiya, caqabadaha aasaasiga ah ee laxiriira nidaamka federaaliga ku saleysan qawmiyadeed ayaa si isa soo taraysa u soo ifbaxay.
Qowmiyaddaan oo sii kordheysa inkasta oo la doonayo in dib u habeyn lagu sameeyo Isbedelada ka dib doorashadii ra?iisal wasaaraha cusub ee isbadal doonka ah Abiy Axmed ayaa hoosta ka xariiqay sida ay u adag tahay in la isku daro dimuqraadiyada iyo federaalnimada qowmiyadeed. Tan iyo markii uu bilaabay siyaasadda, Abiy wuxuu sare u qaaday midnimada iyo fursadaha loo siman yahay ee dhammaan qowmiyadaha, kuna saleysan mabaadi?da dimoqraadiyadda. Intii uu xilka hayay Abiy Axmed, Itoobiya waxay la kulantay xorreyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo deg deg ah.
Xorriyatul qowlka waa la adkeeyay, maxaabiista siyaasadeed waa la siidaayay, Abiy Axmed wuxuu balanqaaday inuu wax ka qaban doono waxa dhabta ah ee u muuqda dowlad hal xisbi ah isagoo abaabulaya doorashooyinka ugu horeeya ee xor iyo xalaal ah ee dimoqraadi ah ee Itoobiya ka dhaca 2020.
Muranka dhulka iyo kheyraadka ee u dhexeeya 80ka qowmiyadood ee kala duwan ee Itoobiya ayaa inta badan horseeday rabshado iyo barakac ballaaran.
Natiijo ahaan, rajooyin iyo riyo ayaa la aasaasay si loo helo wadatashi iyo dal midnimo leh. Iyadoo ay taasi jirto, horumarku wuxuu umuuqdaa inuu udhaqaaqay dhankaas. Itoobiya waxaa laga yaabaa inaanay waligeed sidan u kala qaybsamin, rabshadahana ay ku sii fidayaan qaybo badan oo dalka ka mid ah. Su?aalaha soo baxaya ayaa ah: Dib-u-habeynta ma mushkilad hor leh baa? Ma xorriyadda la dheereeyey ayaa keentay isku dhac?
Sidee loogu beddelaa imbaraadooriyadii hore ee kala duwanaa ee lagu dhisay rabshadaha looguna beddelaa qaran oo casri ah?
Tani ma aha horumar taariikh gaar ah leh; Florian Bieber oo ah borofisoor ka tirsan jaamacada Graz isla markaana hore u ahaa borofisoor wax ka dhiga jaamacada Adis ababa iyo Wondemagen Goshu ayaa horaantii sanadkan ka qoray siyaasada arimaha dibada in horumarada ka socda dalka Itoobiya ay aad ugu egyihiin horumaradii hore ee Yugoslavia.
Marka hore, nidaamka siyaasadeed ee Itoobiya wuxuu si cad u barbar dhigayaa nidaamka siyaasadeed ee Yugoslavia. Sida Yugoslavia, Itoobiya waa dowlad federaal ah oo ka kooban maamul goboleedyo loo abaabulay qaab qowmiyadeed. Intaas waxaa sii dheer, Yugoslavia waxaa u talin jiray Yugoslavia-kii ee shuuciga ahaa, halka gudaha Itoobiya isbahaysiga qowmiyadaha badan ee EPRDF uu xukumayay ilaa 1991. Yugoslavia waxay la kulantay isbedel siyaasadeed iyo fur furnaan dabayaaqadii 1980-maadkii, iyadoo Itoobiya uu ka socdo isbadal siyaasadeed iyo furfurnaan maanta.
Asigoo intaas sii raaciyey, ?Ma jirto sabab lagu kasbado oo loo aamino in Itoobiya aysan la kulmi karin masiibo lamid ah tii Yugoslavia-tii hore.?
Iyadoo aan loo fiirinin nidaamka siyaasadeed, isbeddelada siyaasadeed waxay la imaanayaan loolanno awood cusub leh. Loolankan awoodeed oo qarxa ee suurtagalka ah ayaa fudud in loo qaato qaab xafaaltan qowmiyadeed oo ah nidaam ku saleysan qowmiyadeedka.
Dhibaatada iyo isha isku dhaca waa nidaamka siyaasadeed laftiisa, iyo ganacsatada siyaasada oo si khaldan ugu adeegsada si ay ugu helaan awoodooda. Iyagoo ballan qaadaya inay horumariyaan danaha hal ama in kabadan oo la xushay, qowmiyadaha, siyaasiyiinta, dhaqdhaqaaqayaasha iyo xisbiyada siyaasadeed waxay isku dayayaan inay uga faa?iideystaan ??loolanka qowmiyadeed danahooda gaarka ah.
Aasaaskii burburintii rabshadaha lahayd ee Yugoslavia waxaa la dhigay sanadihii la soo dhaafay markii aqoonyahanno siyaasadeed ay doonayeen inay ku helaan awood iyagoo adeegsanaya qaab dhismeedka federaalka oo qowmiyadeed ee dalka; wax u eg horumarka maanta ka socda Itoobiya. Bieber iyo Goshu waxay siinayaan digniinta soo socota Itoobiya iyagoo ku salaynaya khibrada Yugoslavia: Waqtiyada xorriyadda siyaasadeed, nidaamyada federaalka qowmiyadeed ayaa si gaar ah u nugul.
Waxay u badan tahay inaan wajahayno waqti muhiim ah taariikhda Itoobiya. Dalkaan hadda wuxuu fursad u heystaa inuu ku hormaro sidii waddan midaysan, oo xuquuq siman oo dhammaystiran u leh dhammaan muwaadiniinta iyadoo la ilaalinayo sharciga. Nidaamka siyaasadeed ee dalku wuxuu umuuqdaa mid si gaar ah ugu nugul ciyaarta jilicsan ee awooda iyo siyaasadaha qowmiyadeed ee kala qeybinta ee salka ku haya cabsida, taas oo xaalada ugu xun ay sababi karto isku dhacyo waaweyn iyo dhimasho.
Xuquuqda aasaasiga ah ee dimoqraadiyadu waa dhibanaha koowaad ee xaaladaha noocaas ah. Yaa dulmiya qofka laga yaabo inuu isbeddelo waqti ka dib ? laakiin weligiis ma jiri doono nidaam u shaqeyn kara qof walba. Ma jirto sabab lagu kasbado oo loo aaminsanaado in Itoobiya aysan la kulmi karin masiibo la mid ah tii Yugoslavia-da, ama tusaalooyin kale oo argagax leh oo dowlado ku kala firxaday qowmiyadaha.
Abiy Axmed ayaa umuuqda inuu cagta saaray dariiqa adag ee loo wajahayo nidaam siyaasadeed oo ahmiyad yar siiya qowmiyadaha Itoobiya. Sida ugu fiican, isbadalka noocaas ah wuxuu ku qasbi doonaa shaqsiyaadka ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan inay iskaashi iyo tanaasul sameeyaan si loo abuuro loona hormariyo fikradaha wax u tari kara dalka oo dhan. Sidan oo kale, qabyaaladda ayaa si tartiib tartiib ah dhinac looga riixi karaa, oo kuwa huriya rabshadaha iyagoo ku marmarsiyoonaya inay u dagaallamayaan baahiyaha hal qowmiyad ayaa si tartiib tartiib ah u waayi doona rafcaankooda. Xaalada ugu xun, xorriyadda la kordhiyay ayaa ugu horreyn ka faa?iideysan doonta ganacsatada ugu codka dheer uguna xiisaha badan iyo kuwa u ololeeya danaha gaarka ah ee kooxaha shaqsiyadeed, taasoo markaa sii wiiqeysa kalsoonida nugul ee u dhaxeysa qowmiyadaha Itoobiya.
Hadalka bulshada waa in lagu xidideeyo maskax oraneysa: Itoobiyaanku marka hore, qowmiyada marka labaad.
Wadada loo maro xorriyadda, dimuqraadiyadda si fiican u shaqeyneysa ee Itoobiya ma sahlanaan doonto. Taariikhda ayaa ina tusinaysa in howlaha noocan oo kale ah ay yihiin kuwo xanuun badan. Weli, isbeddelka ayaa ka sii xun. Haddii aan siyaasadda xididdada loo siibin, waxay sii wadaysaa inay soo saarto natiijooyin nasiib darro la mid ah sidii hore.
Waxaa la gaaray wakhtigii dadka reer Itoobiya ay u bilaabi lahaayeen inay u dhaqaaqaan hal jiho. Hadalka bulshada waa in lagu xidido maskax oraneysa: Itoobiyaanku marka hore, qowmiyada marka labaad. Dhowr sano gudahood, Itoobiya waxay si dhab ah isugu calaamadeyn kartaa inay tahay dowlad weyn oo Afrikaan ah, waxayna siineysaa muwaadiniinteeda fursad ay ku noolaadaan nabad iyo dhammaan fursadaha mustaqbal ifaya. Si loo gaaro himiladaas, waa inay u daayaan taariikhda inay noqoto wax la soo dhaafay, oo ay qaataan mustaqbalka sida hal qaran.